Funda ukuthi Ungayandisa Kanjani Imali Ngokusebenzisa Amandla Awesome Ebhokisini Lakho Lokucinga Elincane | Martech Zone
Ukusesha ulimi olukhulunywa emhlabeni wonke. Futhi ibhokisi lokusesha liyingosi kuzo zonke izimpendulo zakho. Ekhaya ukuphupha ngombhede omusha wefulethi lakho? Google imibhede yokulala ehamba phambili yamafulethi amancane. Emsebenzini uzama ukusiza ikhasimende ukuthi liqonde izinketho zalo zokubhaliselwe? Sesha i-intranet yakho ngentengo esesikhathini kakhulu nemininingwane ongabelana ngayo nabo.
Ekusebenzeni okuphezulu, sesha futhi udlulise amehlo kuqinisa phezulu naphansi. Amakhasimende athenga okuningi futhi ahlala ethembekile, futhi abasebenzi bakhiqiza kakhulu futhi bahlala bethembekile lapho bengathola abakufunayo, futhi bathole izincomo ezenziwe zaba ngezakho.
Kusuka kokuhlangenwe nakho kokuhweba kwedijithali kuya emsebenzini womhlaba wonke wedijithali, Mthokozisi isiza izinkampani ukwakha izixazululo ezinamandla zokusesha nokuthola idatha ukujabulisa abasebenzisi nokukhulisa inani ledatha etholakalayo.
Ukusesha kuyindlela engaphezu kwebhokisi nje. Ingenza noma iphule lonke ulwazi lwedijithali.
Nazi izibonelo ezimbalwa zendlela Fusion, Ipulatifomu yokusesha yeLucidworks AI-powered, isiza umthengisi womhlaba wonke ukukhulisa imali, ibhange eliphezulu lakha ubudlelwano bamakhasimende ajulile, inkampani enkulu kunazo zonke emhlabeni kawoyela negesi inika amandla izinqumo ezixhaswa ngemininingwane, kanye nedathabheyisi yezokwelapha isekela ukuxilongwa okusheshayo nokunakekelwa kwezokwelapha.
Lenovo Uluhambise Kanjani Usesho Ukuvula Umthombo Wokukhuthaza Ukuguqulwa Nokubaluleka
Ngenkathi uMholi Wokusesha Komhlaba Wonke uMarc Desormeau ethatha iqembu lokusesha leLenovo.com, wabhekana nombuzo:
Kungani ukusesha kungathuthukisi ngendlela esiyifunayo?
Ifuna ukufaka isixazululo sayo sosesho olususelwa ku-FAST ngeplatifomu engaxhasa ukuguqulwa okugcwele kwedijithali, Lenovo iphendukele ku-Gartner nase Forrester ngamathuba aqinisekisiwe. I-Lucidworks Fusion inconyiwe. Ubuchwepheshe bomthombo ovulekile be-Fusion bufaka amathuluzi angaphandle kwebhokisi avumela ukuguquguquka nokwenza ngokwezifiso ukuze imiphumela yokusesha iklanyelwe ngqo kulayini womkhiqizo, indawo, ulimi, umsebenzisi, nokuningi. Lokhu kubalulekile kumkhiqizo womhlaba wonke njengoLenovo onemikhiqizo ehlanganisa amabhizinisi e-B2C, SMB, ne-B2B futhi ahlinzeka amakhasimende ezimakethe eziyi-180 ezikhuluma izilimi ezingaphezu kwezingama-60.
Abantu baqala ukuqonda ukuthi kunedatha yangempela lapha ebalulekile futhi singayisebenzisa ukwethula amakhasimende ethu ngomuzwa ongcono.
UMarc Desourmeau, Umholi Wokusesha Womhlaba Wonke, eLenovo
Ngemuva kokusebenzisa i-Fusion, uLenovo wabona umnikelo wemali engenayo yaminyaka yonke ngokusesha kukhuphuke ngama-95%. Esizeni sokwesekwa kwamakhasimende sikaLenovo, amazinga wokuchofoza kanye namazinga okubuyisa akhombise ukuthuthuka okumangazayo, okufakazela ukuthi amakhasimende akusheshe akuthole okuqukethwe abakufunayo. Futhi, ngokuhlanganisa umsebenzisi amasignali- kufaka phakathi ukuchofoza, engeza enqoleni nokuthenga- ngokufunda ngomshini, ithimba lokusesha likwazile ukulinganisa imiphumela yosesho yenani elikhulu lemininingwane ku-knowledgebase yabo. Ukubaluleka, okulinganiswa ngokuthi amakhasimende achofoza kangaki kumphumela wokuqala uma kuqhathaniswa nanoma imuphi umphumela olandelayo, kuthuthuke ngaphezu kuka-55% esikhathini esiyizinyanga ezimbalwa selokhu kwethulwe izimpawu ze-Fusion.
Abasebenzi beBhange Eliphezulu basebenzisa izincomo ezenzelwe wena ukukhuphula inani lempilo yamakhasimende
Elinye lamabhange aphezulu e-US lalinenkinga yokusiza abeluleki babo bezezimali ngokushesha ukuthola izeluleko ezenziwe zaba ngezabo, ezifanele nemikhiqizo yamakhasimende. Ibhange linezingcezu ezingaphezu kuka-250 zocwaningo lokutshala imali ezikhiqiziwe futhi ezilayishwe nsuku zonke ohlelweni, kepha abeluleki abaningi banesikhathi sokuzijwayeza ngemibhalo eyi-15-20 kuphela. Kwakungenakwenzeka ukuhluza kuzo zonke izinto ezisetshenziswayo, ukuzibeka ngokomongo, bese uthola ukuthi yini efaneleke kakhulu kumakhasimende abo angama-2,000 XNUMX. Isikhathi esathathwa ukukhomba izixazululo sisho ukukhiqiza okuphansi namathuba alahlekile okuxhumana namakhasimende.
Usesho lumaphakathi kokuhamba komsebenzi komeluleki wezezimali futhi lusetshenziselwa ukuguqukela kokunye ukutshalwa kwezimali, ukuhweba, noma ukuhamba komsebenzi.
AbakwaLucidworks babazi ukuthi abeluleki babedinga ukuvula ngokushesha ukuxhumana phakathi kwezintshisekelo zamakhasimende nezindlela zokuziphatha. Nge-Fusion, inkampani ikwazile ukukhiqiza uhlu olubekwe eqhulwini lwemininingwane engenzeka kanye ne-analytics ukubasiza ukukhomba ngokushesha Isenzo Esihle Esilandelayo ikhasimende ngalinye. Abeluleki bezezimali manje sebengabeka phambili ukuthi amakhasimende kufanele athenge noma athengise utshalomali oluthile ngokuya ngamathrendi namaphethini kuma-akhawunti, ukuhlinzeka ngohlobo lwamakhasimende olwazi "ongaziyo". "I-Next Best Action" yenza izinqumo ezithatha isikhathi futhi ithuthukise ukusebenza kahle kwabeluleki ukuze bathengise izinsizakalo zamakhasimende ezibhekiswe kakhulu ngesikhathi esincane. Konke lokhu kuholele ebudlelwaneni obujulile namakhasimende nokwenyusa imali.
Landa i-Ebook yamahhala: Shintsha Isipiliyoni Someluleki Wezezimali Nge-AI
Ukukhishwa Kwe-Oyili Negesi Okubanzi Okuvela Eminyakeni Engu-150 Yedatha Ebalulekile
Enye yezinkampani ezinkulu zomhlaba zikawoyela negesi yayinolwazi olwabuyela emuva eminyakeni eyi-150 lusabalale emaphepheni, kulwazi, kuzicelo, kuma-imeyili, ngamadrayivu abiwe futhi kwabiwa kuwo, emhlabeni wonke. Ngenxa yokuthi abasebenzi bebengayitholi imininingwane abayidingayo, baqala ukuyicwilisa, bagcina bekhulisa isisekelo solwazi saba yimibhalo eyizigidi ezingama-250. Ukuthola uhlobo olusesikhathini samanje, inguqulo enembile kuwo wonke amathuluzi ahlukene angama-28 inkampani ebiwasebenzisile ibinzima. Eminye idatha ayikhonjiswanga kanti eminye imithombo ibingaphezulu kwe-terabyte enkulu, okunzima kakhulu ukuyikhomba. Noma amathuluzi ebuyisa imiphumela emihle, abantu bebengayethembi imiphumela — futhi uma ungakutholi okudingayo, idatha ayinalusizo.
AmaLucidworks angena nomsebenzi wokudala isipiliyoni sedatha esicindezelayo ngokusebenzisa ama-analytics ukuxhuma ama-silos wolwazi, ukudala ikhathalogi ye-agile yomongo nokubaluleka, futhi inike amandla abasebenzisi ukukhipha ulwazi olufanele lwebhizinisi kuyo yonke imininingwane yomlando. UFusion ukwazile ukuhlaziya izigidi zemibhalo nge ukucubungula ulimi lwemvelo (NLP) ngesiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, isiRashiya, vumela ukubuyiswa kolwazi kuyo yonke imithombo yedatha, futhi kusize ukutholakala kolwazi olusha ngezimbangela ezisuselwa kuzintshisekelo ezithile ezilondolozwe abasebenzisi. Ngokuthunyelwa, amaqembu okuhlola ayakwazi ukusebenzisa ingcebo yedatha ekhiqizwayo, futhi athole ngokushesha imininingwane efanele lapho eyidinga, okugcina kuholele ekuthathweni kwezinqumo okungcono nasekugcinweni kwezindleko.
I-AI-Powered Portal Portal Isiza Odokotela Ukuxilonga nokunakekela Iziguli
I-AllMedx enombono i-Google yodokotela. Babazi ukuthi odokotela babekhungathekile ngezinjini ezivamile zokusesha ezifana neGoogle neBing ngoba imiphumela yayijwayele ukuhlanjululwa nokuqukethwe okungathembekile okwenzelwe abathengi neziguli. I-AllMedx ibenomuzwa wokuthi odokotela nabanye ochwepheshe bezempilo bangazuza kuthuluzi lokusesha elitholile okuqukethwe kwalo kuphela kuma-athikili ahlolwe yi-MD, omagazini bezempilo abanomthelela omkhulu, kanye neminye imithombo yemitholampilo ekhethiwe, ehlonishwayo. Inhloso bekuwukuqeda izingcezu zohlobo lwabathengi ezingasebenzi, ezingaba lusizo oluncane kodokotela abafuna izimpendulo zemibuzo yomtholampilo, yokukhomba.
Ngemuva kokuthi i-AllMedx yakhe ikhophasi ehleleke kakhulu ngokususelwa kubuchwepheshe obuningi bokuqukethwe kwezokwelapha, badinga ukwenza kube lula ukusesha. Kusetshenziswa ubuchule be-ML ye-Fusion, imiphumela yosesho yenzelwe umsebenzisi ngamunye. Ukuhlolwa komsebenzisi kuvumela I-AllMedx ishuna kahle amapayipi ombuzo futhi wandise ulwazi lokusesha lwabasebenzisi. Nge-Fusion, i-AllMedx ingabasekela ngokuzethemba abasebenzisi bayo abangodokotela ngokunikeza ukufinyelela kumadokhumenti angaphezu kwezigidi eziyi-12 aqinisekisiwe ngosesho olunikwe amandla yi-AI. Ngokuya ngempendulo yomsebenzisi odokotela, ithimba le-AllMedx linesiqiniseko sokuthi isayithi lizokwandisa ukufinyelela olwazini olubucayi, lokuthola usizo lwezempilo oluzosiza ekuthuthukiseni ukunakekelwa kweziguli.
Funda kabanzi mayelana nokuthi i-AI iguqula kanjani umuthi ube ngcono
Thola Ukuthi Kusho Ukuthini Ukuguqulwa Kwedijithali kwe-AI
Ukuphakama kwalokhu kwaziswa kwedijithali kuwo wonke ama-verticals ukwenza ngezifiso, noma amandla okubikezela izinhloso zomsebenzisi ngamunye. Yilapho ekugcineni ulahla khona izinkulungwane zemithetho ephethwe ngesandla futhi esikhundleni salokho usebenzise ama-analytics wokuqagela kuphela, kepha ukufunda imishini, amasignali, Futhi ukucutshungulwa kwezilimi zemvelo. Ngokubambisana, bonke lobu buchwepheshe bunika amandla ukusesha kwakho kube ngaphezu kwebhokisi elincane elisekhoneni lesikrini.
Futhi ibhokisi lokusesha akuyona ukuphela kwengxenye yesipiliyoni sedijithali esivuthiwe ukuguqulwa — ihlakaniphe kangakanani ingxoxo yakho? Enye yezinto ezibaluleke kakhulu nezithuthukisa kakhulu ongazenzela ibhizinisi lakho ukwethula isisombululo se-smart chatbot. Lucidworks Izimpendulo Ezihlakaniphile isithuthukisi se-chatbot esisebenza kuyo yonke indlela ye- ukucutshungulwa kwezilimi zemvelo, ukufunda imishini, Futhi ukuqoqwa kwezimpawu okuvela ku-Fusion kulwazi lwe-chatbot. Ukuzisebenzisela okungcono nge-chatbot ehlakaniphile kunika abasebenzisi insizakalo esheshayo futhi kukhulule ukwesekwa nama-ejenti osizo ukugxila kumacala ayinkimbinkimbi, angaphandle. Amakhasimende anelisekile futhi abasebenzi bahlanganyela kakhulu emsebenzini wabo.
Noma ngabe yibhokisi lokusesha elingenalutho noma umsizi okhaliphile, i-Lucidworks Fusion inikela ngamakhono ebanga lebhizinisi ukuklama, ukuthuthukisa, nokuhambisa izinhlelo zokusebenza zosesho ezihlakaniphile nganoma yisiphi isilinganiso, futhi ibonwe ngokuhola ucwaningo oluzimele lobuchwepheshe kanye namafemu okweluleka iForrester neGartner. Izinkampani kwi-Global 2000 zithembele kuLucidworks nsuku zonke ukuze zinike amandla izinhlelo zazo zokubheka abathengi nezamabhizinisi. Unentshisekelo yokuthola ukuthi ungakuthola kanjani okuningi kusesho lwakho?
Xhumana neLucidworks Namuhla
Tags: usesho olunikwe amandlaumabhebhanaibhangei-chatbotisipiliyoni sedathaukuguqulwa kwedijithalii-forresterusesho lwangaphakathiLenovoinani lempilolucidokuhleUkuhlanganiswa kweLucidworksukufunda imishiniukucutshungulwa kwezilimi zemveloisenzo esilandelayo esihle kakhuluNlpamasignaliizimpendulo ezihlakaniphileukwesekaukusesha okuncaneumsizi oqondile
Ngaphambi kokujoyina i-Lucidworks, uVivek wahola ukuthuthukiswa komkhiqizo nebhizinisi ebhizinisini lokusesha e-Amazon Web Services, lapho abuye wasungula khona i-Amazon Elasticsearch Service futhi wasiza ukukhulisa ibhizinisi lokusesha kusukela ekuqaleni kuze kube sezingeni elikhulu. Eminyakeni yakhe engama-20 + ekwisoftware uVivek wasebenza kwezobunjiniyela, ukuthuthukiswa kwebhizinisi, nezindima zomkhiqizo ezinkampanini ezahlukahlukene kubandakanya iVizu (etholwe nguNielsen), Ulwazi Oluhlanganisiwe (olutholwe nguNeustar), kanye noSBI Razorfish.
Ibhizinisi le-Crunchbase le-Salesforce: Khomba, Ngenisa, futhi uvumelanise i-B2B Prospect Data